Mitsangàna Street Team — Trip LEE - OFISIALY SITE
Hey ry zalahy! My boky Mitsangàna dia fanafahana Janoary 27 (amin'ny herinandro ambony!) ary mila ny fanampianao aho.
Izahay mitady olona izay afaka manampy ho anisan'ny Street Team sy manampy antsika hampiely ny teny momba ny boky an-tserasera sy teo amin'ny haino aman-jery sosialy.
Afaka mijery bebe kokoa momba ny boky ao amin'ny Sokajy://RiseBook.tv
Ny vavaka ataoko dia ny hoe Andriamanitra dia handray ity boky ity ary mampiasa ny hafatra mba hanohitra ny taranaka mba hitsangana ka ho velona. Ary afaka manampy antsika nampiely izany hafatra amin'ny alalan'ny sonia ka ho ampahany amin'ny Street Team ho an'ny boky.
Toy izao ny fomba izany dia asa ...
1 – Ampiharo ETO.
Aoka isika hahafantatra bebe kokoa ny momba anao, Nahoana no te-ho anisan'ny ekipa, ary hizara anareo haino aman-jery sosialy sy ny aterineto rohy amintsika.
Ny mpitory dia hamerina hijery ny fampiharana ary raha voafidy…
2 – Vakio ny mialoha ny boky.
Dia hampandehaniko ho atỳ aminao ny PDF dika mitovy amin'ny boky mba hamaky.
3 – Join ny tsy miankina Facebook Group.
Ianao nahazo fanasana mba hanatevin-daharana ny vondrona Facebook manokana avy ny mpitory. Ery, ianao hahazo iray taonina afa-po be ny hizara amin'ny namanao. Misy zava-dehibe mitranga manodidina ny fanafahana ianao fa te-hahafantatra momba.
Mba miseho ao amin'ny vondrona fotoana vitsy, koa!
4 – Aparitaho ny Teny!
Rehetra mangataka ho takalon'ny ny mialoha fa dika mitovy dia Te mamelatra ny teny ho any amin'ny havanao ary koa ny famoahana marina famerenana ny boky ianao fahiny nanana fahafahana mba hanamarina izany.
Tena mino ity Hafatra ity ary mivavaha fa dia hitaona ny fanahinareo sy ny hafa mba ho tonga hifoha ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Aoka isika hanomboka ny hetsika. Afaka manomboka aminao.
TaylorBradian • Janoary 20, 2015 amin'ny 10:16 aho • navalin'i
Izaho dia 21 taona mpino izay tokana ray ho tsara tarehy 16 volana zazavavy kely. Izaho koa ho toy ny famandrihana mpandraharaha ho an'ny mpanakanto amin'ny Kristianina Hip Hop. Aho ny zokiny ihany koa, fanabeazana fototra lehibe (anglisy), ao amin'ny Campbell University in North Carolina. amim-pahatsorana, ny hafatry ny Kristy namely ahy amin'ny fomba vaovao rehetra, taona lasa aho rehefa nampahafantarina ny Kristianina voalohany Hip Hop. Ny filazantsara dia aseho amin'ny fomba izay afaka mahatakatra izany, ary hizara izany amin'ny namako. Roa taona lasa, izahay, dia nanana fahafahana hitondra Trip amin'ny tanàna niaviako ny Sanford, NC, izay nanana nijanona fitetezam-paritra ho an'ny The Good Life Boky Tour. Tena mahatahotra ny mahita ny valin-olona hafa nanana, raha nandre azy sy nahatakatra ny filazantsara voalohany. Faly be aho, dia ho bebe kokoa ny ho fanampiana eo amin'ny fampielezana ny teny momba ity boky vaovao avy amin'ny Trip. Ny olona mila mandre ny filazantsara azy ho vanim-potoana mba hahafahany mahatakatra izany. Toy Trip nataony tao an-bitany boky, Tsy andriko ny famakian-teny, famerenana, sy ny fizarana ny azo ampiharina sy hitantara-tantara afaka amin'ny hafa. Sambatra aho ampy handray ny fanantenana taona lasa, izay haharitra amiko mandrakizay. Tiako ny hafa hahita ihany io fanantenana, ary mbola hatoky fa mazava ary aza be sasinteny Trip manolotra izany manantena ny boky vaovao. Misaotra anao noho ny fotoana mamaky ity, ary Mitady fanampiana fatratra koa ity hafatra ity fa isika rehetra dia Tena mila. Andeha isika, miara-mitsangana!
David • Janoary 21, 2015 amin'ny 10:22 PM • navalin'i
Thankyou sooooo mahatahotra be noho izany afaka hanampy hampiely ny vaovao amin'ny bokinao!! Tsy afaka miandry ny faha-27!!!
David • March 29, 2015 amin'ny 5:13 PM • navalin'i
Na oviana na oviana aho naka:(xD